Kutheni Kufuneka Ibhendi Livutha eMelika?
Kutheni Ubhanjelwe Ubhenqo?
Ukuphonononga iziphakamiso zokuvalwa kweBhanki
Nangona ukudibanisa kungabonakali, kukho intsebenzo ebalulekileyo phakathi kwemizamo yokunqanda ukutshisa okanye ukuchithwa kweflegi yaseMelika kunye nobuKrestu bobuzwe . Akukho nto ehlambulukileyo ingahlambulukanga, ngoko ke ingcamango yokuba ifulegi inokungcoliswa ivela kwi nkolelo yokuba iflegi ingcwele ngenye indlela. Le nkolelo inokukhuthazwa ngokunyanisekileyo yi-National Nationalists, okwenene ukuthanda ukunyaniseka kwenyaniso kunye nenkolo yinyaniso kuye kwaxutywa kwintlangano yezopolitiko.
Ukutshitshiswa kweBhodi kunye nokuThatyelwa kweBhanki kuyaxhatshaza
Ingxabano ethandwa kakhulu kwiindawo zokutshisa okanye ukuhlambalaza ifulegi yaseMerika kukuba bayakhubekisa abantu. Sekude ixesha elide, ekubeni abantu bancedisa ngokubanzi ukurhoxiswa koorhulumente kwintetho engathandeki kwezopolitiko. Inkululeko yentetho ayithethi nto ukuba intetho ingavalwa ngenxa yokuba ikhubekisa abantu abaneleyo. Ukuba sinokunqabela ukutshisa ifulegi, kutheni ungavumi ukuvutha umntu kwi-effigy? Ukuba sinokunqanda ukutshatyalaliswa kweflegi, kutheni ungavumeli ukuchithwa kweBhayibhile, isiphambano okanye i-Qur'an?
Abantu abachaswanga kwiNgqungquthela yokutshisa nokuchithwa
Abaxhasayo bemibutho yokutshisa okanye ukuhlambalaza ifulegi yaseMerika banganxininisa ukuba ukuvinjelwa okunjalo kuyintando yabantu kwaye bahlaselwa kuphela yinkantolo "ye-activist". Le ngxabano ekhethekileyo kuba ithetha ukuba urhulumente unamandla okunciphisa inkululeko yabantu ngale ndlela. Injongo yokuhlaziywa komgwebo kwemithetho kukuthintela oorhulumente ukuba bangaphaya kwamandla abo.
Akuyiyo yonke into abantu "bayathanda" ukuba ibe ngumthetho.
Ukutshatyalaliswa kweBhendi kunye nokuThatyelwa kweBhanki akuyiyo inkulumo yangempela
Enye ingxabano eye yahluleka ngokuqhubekayo enkundleni, kodwa iyaqhubeka isinikwa, ukutshisa okanye ukuhlambalaza ifulegi yinyathelo, kungekhona inkulumo, ngoko ayihlanganiswa phantsi koHlomelo loLungiso.
Oku kuyinyani kwaye ukuba yinyani, iya kuvumela urhulumente ukuba avimbele "izenzo nje" njengeflegi yokumisa. Akukho mntu ukholelwa ngokunyanisekileyo ukuba intetho iphela kumagama kuba sisebenzisa iimpawu kunye nezenzo ukunxibelelana imihla ngemihla. Izenzo zentetho zingadinga ukuhlola okungakumbi kunamazwi, kodwa zisathetha.
Ukutshisa iiflegi kunye nokutshatyalaliswa kweflegi kuvuselela ulwaphulo
Ukuba ngabaxhasayo bokuvalwa kweflegi nokutshatyalaliswa abakwazi ukuqinisekisa abantu ukuba izenzo ezinjalo aziyiyo intetho yangempela, bayathetha ukuba yintetho ekhuthaza ubundlobongela kwaye ngoko ingavalwa. Kuyinyaniso ukuba ukunyanzeliswa kokuxhatshazwa kungavalwa, kodwa isongelo kufuneka sisondele kwaye lujoliswe - urhulumente akakwazi ukuvala intetho ekhokelela elugonyeni kuba ayithandi. Ukuba oko kwakuyinyani, amaqela obundlobongela angayifumana nayiphi na intetho ekhutshwe ngokunyanyiswa ngamaxesha afanelekileyo.
Ibhendi yokutshisa kunye neenqabileyo zokuhlambalaza abahlaseli bezilwanyana
Ukubonelelwa malini amalungu omkhosi okhuseleyo kufuneka okanye angabizwa ukuba ahlawulele, akukho mntu ufuna ukubonwa njengabanyelisa. Oku kwenza ukuba ibango lokutshisa ifulegi lihlazisa iimfesane into ekhangayo, kodwa ibango yintoni eyihlazo. Akukho mntu olwa kunye nokufa ngenxa yengubo yengubo, benza njalo ukwenzela iinjongo ezibekwe yiflegi.
Iinzame zokuphazamisa ezo ngcamango, kuquka nelungelo lokubhikisha nokuhlasela urhulumente, yiyiphi ihlazo lezilwanyana ezingamhloneliyo.
Ukutshitshiswa kweBhodi kunye nokuHluthwa kweNtshatshazi be-Anti-American
Abanye bathi ukutshisa nokuhlambalaza ifulegi kufuneka kuvalwe ngenxa yokuba bayaphikisana neMelika. Nangona singayinaki into yokuba abanye bayatshisa ifulegi ukukhusela xa urhulumente enza izinto ezichasene namaxabiso aseMelika, kunokuba aphikise amaxabiso aseMelika ngokwabo, ngoko yintoni? I-American ayikhululekile ngokwenene ukuba abantu abakhululekile ukuveza imibono echasayo yaseMelika - kwaye ukuba iMelika ayinayo i-anti-American kufuneka ibe yintlonelo kunokuba ibe yinto ephilileyo.
I-Flag of American Is Sacred
Igama elithi "ukungcola" lithetha ukuba ifulegi yaseMerika ingcwele, kodwa ababancedisi abaninzi abanqanda ukukhutshwa kweflegi kunye nokufakela ukutshatyalaliswa kweentlanzi bavele baphume kwaye baqonde ukuba oku kukholwayo.
Akukuphela nje ingcamango yokuba ifulegi ingcwele ngokungonelanelekanga ukucacisa ukukhusela ukuyihlambalaza, kodwa ngokwenene ukuqinisekiswa ngokwayo kukunciphisa isizathu. Nayiphi na isimemezelo sokuba ifulegi ngandlela-thile isimboli sentsapho, nangona iphela, ayihambisani nomgaqo-siseko kuba urhulumente akanayo igunya.
I-Flag Flag yaseMelika ibandakanya isizwe saseMerika
Kuye kwachazwa kwimithetho yaseMelika elawula ukusetyenziswa kweflegi yaseMerika ukuba iququzelele isizwe saseMerika kwaye oko "into ephilayo." Abancedi bokuvalwa kweflegi etshabayo kunye nokunyaniseka bangatsho ukuba izenzo ezinjalo zihlasela isizwe saseMelika ngokubanzi, kodwa oku kugxininisa ukuba umthetho unako ukucacisa iindlela zokubheka iiflethi zaseMelika zamukelekile kwezombusazwe kwaye ezinokuthi zithintele njengezopolitiko ezingavumelekanga.
I-Flag Flag yaseMerika NjengeSikweni Senkcubeko kwiMfazwe Yenkcubeko
Okubizwa kuthiwa "imfazwe yenkcubeko" eMelika kuyinto engqubuzanayo ngubani oza kugqiba uhlobo kunye nemida yeenkcubeko zaseMerika. Kwixesha elidlulileyo, inkcubeko yaseMerika yayininzi kakhulu (nangona ingabikho kuphela) echongwe nguMKristu wamaProthestani. Oku kwaguquka ngokugqithiseleyo kwinqanaba le-20 leminyaka, kunye nokuphuthuma okukhawulezayo okwenzeka kwiminyaka yokugqibela. NgamaKristu wendabuko, ekhuselekileyo kwiimeko zabo zonqulo, ezentlalontle kunye nezopolitiko, utshintsho olubandakanyekayo kulezi zitshintshi luyintlekele.
Imizamo yokunqabela ukutshisa okanye ukuhlambalaza ifulegi yaseMelika ibalulekile kumaKristu alondolozayo alwa imfazwe yabo yemfazwe.
Akukho mntu uzama ukumisa abantu ekutshiseni ingcezu yengubo. Kwa maKristu, ifulegi ibonisa iMelika - kwaye kubo, iMelika nguSizwe samaKristu . Lizwe elisikelelwe nguThixo kwaye linikezelwe nguThixo umsebenzi wokukhupha, ukudemokhrasi, nokuguqula umhlaba.
Ukutshisa ifulegi yaseMerika ngako oko akubonwanga nje ngokuhlaselwa kobuzwe, amaxabiso aseMerika, kunye nezithethe zaseMelika, kodwa kunye nobuKristu baseMerika kunye nenjongo kaThixo ngabantu baseMerika. Ukuhlambalaza ifulegi kubonwa njengokuguqula ityhila engcwele yento engcwele kwizinto ezingcolileyo, ezingabonakaliyo kwaye zingabalulekanga.
Imithetho yokuqala ekukhuseleni ifulegi yaseMerika yayijoliswe ekusebenziseni kwayo kwiintengiso zentengiso, into ebonwa yinto ephantsi kwaye ingenakufaneleka. Le mithetho yayizama ukuchaza oko ifulegi laseMerika lingathetha kubantu; Kuyafana nemithetho ecetywayo kunye nezilungiso zomgaqo-siseko namhlanje. Akuyifaki yeflegi ebonakalayo abantu abazama ukuyikhusela, kodwa intsingiselo yokutshala kuyo. Ezinye iinguquko ezidalwe ngabanye abantu zibonwa ziphantsi, zingenakufaneleka, kwaye zifuna ukunxinwa ukuze zithole ulawulo olwengeziwe kwi-Amasiko aseMelika ngokumisela umthetho.
Ukwahlula phakathi kweengcamango, Iingcamango namaqiniso
Ziziphi iingcaciso zeTheory?
Yintoni Abafanele Abazali BakaThixo Abayenze Ngayo Abantwana Babo?
I-Flag Flag yaseMerika ibonisa ntoni?
I-verbiage engaphezu kweNgqiqo kunye neengxabano
I-Technology vs Religion, Technology njengenkolo
Ngaba u-Israyeli unqulo okanye urhulumente?
I-Bias yoBungqina: I-Flaws kwi-Reasoning and Arguments
Ulwimi, iNjongo, kunye noNxibelelwano
Uhlengahlengiso lokuQala kunye nokuQinisekisa
IsiGama lesiTaliyane IsiGama seKhalenda
Ukuthi 'It' ngesiSpeyin
Ixesha leMardi Gras nini?
IFone Fide Occupational Qualification
I-Venus kwiCarcer - Iimpawu Zothando
Iinyanga ezimangalisayo zeMakemake
Ukubaluleka kweLogic kunye nefilosofi
12 I-Hilarious 'Billy Madison' Quotes
Indlela Yokuthetha Imemori YesiKrisimesi ngesiJamani
Ngubani o wa se Spartacus?
Ukuqonda ukuhluka phakathi kolawulo lwe-DIN neYoke
Uluhlu lweemoto ezili-10 ezinokuphila ngazo
Ukubukela ubuGcisa ngeScrapbooking
Yiba nomthendeleko Omkhulu NgeeNtsana zokuThumela abantwana
Inkcazo kunye Nenkcazelo yeeNyathelo kwi-Exocytosis
UkuThuthwa koThutho kunye neMilinganiselo yePropati
Amaqabunga amaThuthi: Iimpawu ezibonakalayo zeTornado Touchdown
I-Biography kaStephen F. Austin
Ukufaka iifayile ze-Photoshop kuphela
Inkcazo kunye nemizekelo yokuchaza (uhlalutyo)